Wararka Maanta: Jimco, Jan 18, 2013-Madaxweynaha Soomaaliya iyo Wafdigii uu horkacayay oo gaaray Magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula kumi doona Minneapolis jaaliyadda Soomaailyeed ee halkaas ku nool, isagoo uga warbixin doona xaaladda uu ku sugan yahay dalka, gaar ahaan dhinacyada ammaanka iyo dagaalkii ay dowladdu la gashay Al-shabaab.
Sidoo kale, wuxuu waxyaabaha uu madaxweynuhu uga wrabixin doono bulshada Soomaaliyeed ee uu kula kulmayo gobolka Minnesota ayaa waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalka halka uu marayo iyo weliba dib u dhiska Soomaaliya oo ay dagaallo burburiyeen.
“Fikirkiinna iyo waayo-aragnimadiida waa mid ay Soomaalidu baahi weyn u qabaan,” ayuu madaxweyne Xasan Sheekh ku yiri hadal uu xalay u jeediyay Soomaalida ku nool magaalada Washington iyo nawaaxigeeda. Wuxuuna ku daray hadalkiisa: “Dhibaatada Soomaali oo dhan ayay haysaa, Qurbo-joogta iyo kuwa gudaha ku sugan waxaa laga doonayaa inay ka qaybgalaan sidii ay dalka ku dejin lahaayeen, idinkana waxaa la idinka doonayaa inaad dib ugu laabataan Soomaaliya. Dalkuna idinka ayuu sugayaa inaad dejisaan oo aad ku celisaa sidii hore ee uu ahaan jiray.”
Gobolka Minnesota oo ah gobolka ay deggen yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka Mareykanka ayaa waxaa ka socota qabanqaabo lagu doonayo in madaxweynuhu uu khudbad uga jeediyo hool ay isugu imaanaya Soomaali badan oo ku nool dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay la kulmay xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo madaxweynaha Mareykanka Barack Oboma, iyadoo madaxda Mareykanku ay ku dhawaaqeen inay aqoonsadeen dowladda Soomaaliya ayna fureen baal cusub oo lagu xoojinayo xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka.